Ireo masoivoho dia mila an'ity boky ity amin'ny latabatra kafe | Martech Zone
Alakamisy, Jona 18, 2009 Alakamisy, Jona 18, 2009 Douglas Karr
Taona maro lasa izay dia nandeha tany amin'ny lehibeko aho, izay noheveriko fa hevitra tsy mampino hanamafisana ny dokambarotra varotra garazy. Manangana rindranasa an-tserasera ahafahan'ny mpanjifa mahita ny tranony ary manamboatra andro fitsidihana fivarotana garazy. Eo anelanelany, ny mpanao dokam-barotra dia afaka mametraka tapakila iray na roa hisakafoanana na kafe.
Ny zotram-pifidianana dia manome ny aficionado fivarotana garazy amin'ny famolavolana fotoana bebe kokoa ary tsy dia hitondra fiara intsony. Angamba azon'izy ireo atao ny manivana amin'ny teny lakile, elanelana, fotoana sns ... Nihevitra ny sefako fa mendrika izany hevitra izany ary lasa aho naka quote (ambanin'ny $ 10k tamin'izany).
Nolavina izany noho ny fandaniana.
Izy io dia Hevitra novonoina ary nanahiran-tsaina ahy nandritra ny 5 na 6 taona io izay nitangorona nanodidina ny lohako. Amin'ny andro nananganana azy, handatsa-dranomaso aho amin'ny fahafantarana fa mety ho anisan'ny zavatra manokana (miaraka amina fampiharana fampiharana maro hafa). Androany dia misento kely aho satria voarakitra anaty boky vaovao izany…
Nahazo ilay boky misy takelaka (vita amin'ny Teny notsongaina) androany amin'ny mail ary tena mahavariana. Ny kanto manodidina ny famolavolana ny boky, ny kalitaon'ny famoahana, ary ny hevitra ao anaty boky dia mahatonga azy io ho iray amin'ireo boky sarobidy indrindra apetrako eo ambonin'ny latabatra kafe. Tokony hanana kopia ny masoivoho tsirairay!
Ny fampahalalam-baovao ofisialy tamin'ny Hevitra novonoina mivoaka amin'ity herinandro ity ary miroso ny fifidianana! Tiako ny anao mifidy ny Garage Sale Mapper! Voninahitra lehibe tokoa ny voafantina tamin'ireo hevitra farany 50 ho an'ilay boky - Miaraka amin'ny talenta mamorona mahafinaritra aho.
Jun 18, 2009 ao amin'ny 11: 54 PM
Tsy maintsy nifidy ny Garage Sale Mapper aho… mampihomehy loatra!
Jun 20, 2009 ao amin'ny 3: 04 PM
Woohoo! Misaotra tamin'ny vato!